फिल्म ‘चक्कर’को ट्रेलर रिलीज ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
फिल्म ‘चक्कर’को ट्रेलर रिलीज !
सार्वजनिक ट्रेलरमा लिड कलाकार द्वय एभोनराज उप्रेती र अर्पण थापाको द्वन्द्व देखिन्छ भने अभिनेत्री द्वय सृजना सुब्बा र स्मृति पोखरेलको इन्टिमेट दृश्य समेत जोडिएको छ । जसले फिल्मको कथामाथी केहि सस्पेन्स पनि छोड्छ । सेक्स भर्सेज क्राइम फिल्मको थिम हो ।
फिल्मको सम्पादन पनि निर्देशक रौनियारले नै गरेका छन् । रविन आचार्यको निर्माण तथा छायांकनमा तयार फिल्ममा संगीत संगम पन्त र पुष्प पलाञ्चोकेको छ ।
नेशनल मिडिया प्रोडक्सन र केटिएम आर्ट्स हाउस प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनेको हो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा निर्देशक अनुष्कले क्राइम ड्रामा तथा सस्पेन्स थ्रिलर जनरामा फिल्म बनेको बताए । नियमित रुपमा बन्दै आएका नेपाली फिल्महरु भन्दा केहि पृथक बाटोमा रहेर फिल्म बनाएको उनले बताए ।
अभिनेत्री ऋचाले केहि फरक स्वाद पस्किने फिल्म बनेको र आफुले पहिलो पटक प्रहरीको भुमिका निभाएको भन्दै दर्शकलाइ मन पर्ने खुराक ‘चक्कर’ बनेको बताइन् । अर्पण र सृजना पनि फिल्मलाई लिएर आशावादी देखिए । फिल्मको सम्पादनको काम पनि निर्देशक स्वयंमले गरेका छन् । कथा, पटकथा र संवाद पनि अनुष्कको नै हो ।